Ubuhle | Disemba 2021
Sizizwa Kanjani Ngezimbali Zezinwele Kulezi Zinsuku?
2021 | Ezithunyelwa Paul Adams | Isigaba: Ubuhle
Umkhuba we-flower-in-hair wawunomzuzwana eminyakeni embalwa eyedlule lapho izinkanyezi ezinjengoKaty Perry noTaylor Swift babezigqokile, zabe seziphela buthule, njengoba izitayela zivame ukwenzeka. Kepha ngibonile abantu ababili okungenzeka ukuthi bazama ukubabuyisa. Ungangena ebhodini uma izinwele zezimbali ziphinde zangena futhi ngokuzumayo?
Imikhiqizo Emisha Emisha Yokunakekelwa Kwesikhumba Ozozama ngoJanuwari 2019
Imikhiqizo emisha yokunakekelwa kwesikhumba ezokwethulwa ngo-2019, kufaka phakathi ukwethulwa okuvela ngeSonto Riley, Fresh, Kiehl's, nokuningi.
Ungabukeka Kanjani NjengoKeri Russell, Ngokusho Kwe-Her Hairstylist ne-Makeup Artist
Ngokusobala, angikwazi ukukusiza ubukeke njengoKeri Russell, kepha ngingakusiza ukukopisha i-lipstick egqamile namagagasi amahle awagqokile izolo kusihlwa e-Austenland eNew York City. Lowo mlomo? Umculi wezimonyo uTina Turbow ubhale kuTwitter ukuthi nguMarc Jacobs Lust weLacquer eBoom Boom. Ngokuphathelene nezinwele, nakhu isazi sezinwele uBrian Magallones athi wakwenza: 'Ngaqala ngokusebenzisa insimbi engu-1-1 / 4-intshi yokugoqa nokugoqa izingxenye ezi-2-intshi ukuzungeza umgqomo, ngasebenzisa i-flatiron ukuqondisa phansi 3 u-Rene Furterer Vegetal Hairpray ukuyibamba futhi waqeda ngo-Rene Furterer Glossing Spray. Ngakho-ke unayo, izakhi ezibalulekile zokwakha kabusha ukubukeka kakhaphethi obomvu kaKeri Russell. Ubani ozozama? Izithombe: Getty Images
Ngizamile Ngolwesibili: Blinged Out DIY Mani
Ngiwumuntu ophuza ngokuphelele opholishi bezipikili — okusho ukuthi ngivame ukuvala iminwe yonke ngemibala egqotshwe umbala ngaphambi kokuba ngiphume ehhovisi. Isilingo sami sakamuva sokudweba umunwe sikhuthazwe ama-lacquers ezinzipho ze-jewel aqhamuka eSally Hansen's Salon Collection, ikakhulukazi umthunzi ogqamile ohlaza okwesibhakabhaka, i-Heartsapphire. Ungakubheka kanjani ukugxuma ...
Lesi Sifundo Sokugoqa Intamo Sihamba Ngegciwane ku-Instagram
I-Contouring ikuyo yonke indawo, futhi kubonakala isabelo sayo esifanele sokubuyela emuva (siqambe igama elinzima lokuqopha enye yezindlela zokwenziwa esingathanda ukuzisusa ngo-2016). Manje isuswe ebusweni yaya entanyeni, ngesifundo esisha se-Instagram esinegciwane esichaza amandla ezinto zokuzenzela ukuze zithole 'izinciphiso ezincanyana, ezibukeka zinomusa.' Kutholakala ngendlela efanayo nanoma iyiphi indlela ekhohlisayo: Dlalani imibala ekhanyayo nemnyama ngokuqhathanisa ukunikela inkohliso yokujula. Futhi ngenkathi sithanda ukuzijabulisa ngezimonyo, lona uzizwa engaphezulu-phezulu-ingabe kufanele sikhathazeke ngokuthi imuva lentamo yethu libukeka kanjani? Singakwazi nje ukuphumula futhi sigubhe ubuhle bethu ngabanye? Umculi wezimonyo uBobbi Brown kungenzeka ukuthi washo kahle kakhulu lapho echaza ukuma kwakhe ngale ndlela. 'Umkhuba wokukhwabanisa awulungile ngoba utshela abesifazane ukuthi kukhona okungahambi kahle ebusweni babo,' utshele iNew York Post ukuwa okokugcina. 'Kunobuhle ebusweni obugcwele, ngakho-ke angithandi ukupenda isifuba esingekho.' I-Insta-hack iphinde iveze ukuthi nabangewona onjiniyela bazizwa bengaphezudlwana kwayo. 'Intamo yami imvelo yonke. Cha ngiyabonga. Angikudingi ukuphepha kwentamo, 'kuphawula omunye.
7 Imithetho Emisha Yokuthenga Ubuhle
Abangaphakathi bathenga kanjani izinto ezinhle.
Yisiphi isitayela seBlowout Okufanele Ngisithole Kumcimbi Omkhulu Namuhla? Vota!
Usuku olukhulu lwe-primping oluzungeze lezi zingxenye lapha. Uyabona, sonke silungiselela iMiklomelo Yabesifazane Yonyaka kusihlwa, lapho sonke sigqoka futhi sihlonipha abanye besifazane abamangalisa kakhulu abenza izinto ezimangazayo emhlabeni. Ngicabange ukuthi bekuyizaba ezikahle zokuhlela ukuvakasha kwami ​​okokuqala ngqá endaweni yaseNew York eDry Bar, i-salon eyaziwayo edola ama-dollar angama-40, ngenxa yokushaywa kwabo okuhle. Okungiletha embuzweni: Yisiphi isitayela okufanele ngisithole?
U-Emma Chamberlain Uwisa Umkhuba Wakhe Wokunakekela Isikhumba
U-Emma Chamberlain uhlanganyela nenkambiso yakhe yokunakekelwa kwesikhumba noGlamour, kufaka phakathi uwoyela okwenza 'ubukeke njengosana olusanda kuzalwa.'
Ukugqokwa kwale Modeli I-Eyeshadow Yamadola Ase- $ 7 - Hhayi Nje Ngamehlo Akhe (Nakanjani Ngiyakuzama! Wena?)
Isikhathi senye imfihlo yobuhle esiteji sangemuva e-Spring 2013 Fashion Week - uzofuna ukwengeza le eyeshadow yesitolo semithi esikhwameni sakho semithetho yamaqhinga.
Izitayela zezinwele ze-2 Chic & Slightly Edgy To Love Right Manje (Qedela Nge-Haircolor Epholile Ngempela)
Kube yisonto elihle izinwele ezimfishane, uma ungibuza. Izolo besincoma ukugunda izinwele kuka-Mena Suvari kahle, futhi manje kuza ezinye izitayela zezinwele ezimfishane ezimbili esizoxoxa ngazo.
Izinto eziyi-9 ebengifisa ukuthi ngizazi ngaphambi kokushintshela ezinweleni zemvelo
Ucabanga ngokushintsha usuke ezinweleni ezikhululekile uye ezinweleni zemvelo? Nasi sonke iseluleko odinga ukusazi ngaphambi kokushintshela ezinweleni zemvelo.
U-Liz Hernandez Uwisa Umkhuba Wakhe Wokunakekela Isikhumba
Umsunguli we-Wordaful wabelana naye ngefilosofi yobuhle bangaphakathi-nomkhiqizo onabangani bakhe abathi, ‘O nkosi yami, isikhumba sakho siyakhanya!’ Ngokuphindwayo.
Ngiyizamile: I-Superglue Njenge-Fix Yezithupha Eziqhekekile
Lapho nje bengicabanga ukuthi ngiyihambise ngokwanele kule bhulogi - Ukhilimu olwa ne-Monistat njenge-nose-pore-shrinker, noma ubani? Ama-pampers asula njengabasusi bezimonyo? - Bekufanele ngiyozama le thiphu yokufunda yomsindo we-cuckoo yokulungisa iminwe yami eqhekekile yonyaka.
I-Genius Makeup Trick Ezovuselela I-Lin-Eye Liner Yakho Ibukeka
Yebo, yebo, uwabonile wonke amehlo ekati ngaphandle lapho-ungaphezu kwawo. Noma ucabanga kanjalo. Nayi enye into enhle oyithathayo kuNatasha Bedingfield enikeza ukubukeka okuthile okuthe xaxa.
Sivivinye Lesi Silungisi Sokulungisa Izinwele ku-6 Izinwele Zabesifazane
Yikuphi ukuqondisa izinwele okuhle kakhulu? Ama-straightonders wezinwele angalimazi kunzima ukuwathola, kepha le straightener yezinwele iphelela kokunye.
I-Grammys 2020: Izinwele kanye ne-Makeup Engcono Kakhulu Ebomvu
Bona izinwele ezihamba phambili nokubukeka kwezimonyo kusuka kukhaphethi obomvu weGrammys 2020. Siqoqe ukubukeka okuhle kakhulu kweGrammys.
Izinwele Zecher: Ungahamba Kanjani Ubushelelezi, Uqonde Futhi Ucwebe Ebusika
Omunye umkhuba wokulahla siyajabula ukuwubona futhi? Izinwele eziqondile, ezicwebezelayo. Ukuphelela kwesitayela samashumi ayisikhombisa!
Ukuguqulwa Kombala Kwezinwele Zethu Okuthandwa Ngu-2014
Uyazi ukuthi iyiphi indlela elula ukwedlula ukushintsha umbala ngokwakho? Ukubona ukuthi kusebenza kanjani kuma-celebs wakho owathandayo.
Le Akhawunti ye-Instagram Barber Izodonsa Izinhliziyo Zakho
Ulungele ukuthola izimpahla ezithile ngoLwesihlanu? Kuhle, ngoba ngisanda kukhubeka nge-akhawunti kaMark Bustos ye-Instagram futhi kufanele ngabelane ngayo. Phakathi kokugunda izinwele esitolo sezitolo eziseManhattan, uBustos usebenzisa i-Insta yakhe ukubhala izinwele zezinwele azinikeza abantu abangenamakhaya futhi azithumele ngendaba encane. Le phrojekthi, uBustos ayiqale ngo-2012 nentombi yakhe ePhilippines, ilethe ukusikeka okusha kubantu hhayi kuphela eNew York City kepha naseCalifornia, eJamaica naseCosta Rica. 'Okuhlangenwe nakho kuhlale kwehlukile kodwa kufana kakhulu,' kusho uMark etshela iThe Philippine Star. Akunandaba ukuthi ukuyingxenye yomhlaba onjani, wonke umuntu uyawuthanda umuzwa wokugunda izinwele. Kuwubukhazikhazi obaziwa umhlaba wonke ukuthi bonke abantu nemikhakha yempilo bangayithokozela. ' Kulabo abenqaba ukugunda izinwele kukaMark, umgundi oneminyaka engu-30 ubashiya nekhithi elincane okubandakanya ibhulashi lamazinyo, umuthi wokuxubha amazinyo, ibha yegranola namanye ama-wipe. Iya ku-akhawunti kaMark ukuze ubone okuningi bese wabelana ngale akhawunti ekhuthazayo nabangani bakho!
Isisekelo Esihamba Phambili Sesikhumba Esomile
Sicele abaculi bezimonyo zosaziwayo ukuthi babelane ngesisekelo esihle kakhulu sesikhumba esomile. Ukusuka kuChanel kuya eTarte kuye ku-It Cosmetics, nazi izinketho ezingama-25 ezivunyiwe.
kanjani ukuya ocansini esikhathini sakho
izikibha ezinde zabesifazane
owabulala isara season 2